Maxaad ka ogtahay dagaalka yaabka leh ee Sacuudiga iyo Iran ku dhex-maraya Yurub? – Xeernews24
29. Juni 2020 /in WARAR/NEWS /von admin
Maxkamad ku taalla magaaladda Roskilde ee dalka Denmark ayaa toddoba sanno oo xabsi ah ku xukuntay nin heysta dhalashadda dalalka Iran iyo Norway, kaasi oo lagu helay inuu basaasayay, isla markaana uu qorsheynayay inuu dilo dad Iran kasoo jeda oo xidhiidh la leh Sacuudiga, xilli loolanka u dhexeeya dalalkan ku hardamaya Bariga Dhexe uu ku faafay Qaaradda Yurub.
Ragga uu ninkaan bartilmaameed sanayay waxaa iyagana lagu xidhay dalka Denmark horraantii sannadkaan, waxaana lagu eedeeyay in ay Sacuudiga u basaasayeen. Waxay sheegteen in aysan dambi lahayn.
Dowladda Iran toos ugama aysan hadlin eedeymaha loo jeediyay. Laakiin markii sannadkii lasoo dhaafay Midowga Europe uu cune-qabateyn kusoo rogay wasaaradda sirdoonka Iran oo lagu eedeeyay inay shirqool ka qorsheysay gudaha dalalka Netherlands, France, iyo Denmark, ayaa wasiirka Arrimaha Dibadda Javad Zarif waxaa uu seddaxda wadan ku eedeyay inay argagixisada qarinayaan.
“Muddo 14 sanno ah Booliiska dowladda Denmark waxay ilaalinayeen koox dad ah, iyagoo ka war qaba in ay argagixiso yihiin,” ayuu maxkamadda ka sheegay xukunsane Maxamed Davoudzadeh.
SAWIRRO: Ciidamo Itoobiyan ah oo laga saaaray dalka iyo Sababta oo la Ogaad... Fanaan xalay lagu toogtay Addis ababa iyo rabshado xooggan oo ka dhashay (S...